Ogaden News Agency (ONA) – Kacdoonka muslimiinta Ethiopia waxaa ka danbeeya TPLF wayna ku fashilmeen.
Kacdoonka muslimiinta Ethiopia waxaa ka danbeeya TPLF wayna ku fashilmeen.
Posted by ONA Admin	/ September 19, 2012
Muslimiinta Ethiopia bilihii u danbeeyayba waxay ka wadeen magaalada Addis Ababa iyo guud ahaanba dhulka Itoobiya kacdoon Diimeed kadib markii taliska Woyanaha Ethiopia uu faragalin toos ah kusameyay masaajida iyo majlis aclaha wadanakaas.
Males Zenawi, Kaligi taliyihihi hore ee cadaadinta iyo xasuuqa ku hayay ummada muslimiinta ee uu xooga ku haystay waxuu muslimiinta Ethiopia kusoo rogay khilaaf uu ka dhex abuuray maamulka majlis aclaha iyo masaajida isaga oo talada ka xayuubiyay dadkii maamulayay masaajida kuna wareejiyay Diin Cusub uu sameeyay oo lagu magacaabo Al Xabasha.
Musliminta Itobiya oo arrintaas ka dhiidhiyay waxay bilaabeen mudahaaradyo waaweyn oo ka dhacay Addis Ababa oo ay ku diidanaayeen taliska TPLF. Mudaharaadyadaas waxay keeneen in shacab badan oo mulimiin ah la laayo kuwo badana loo taxaabo xabsiyada. Waxaa si toos ah loo weeraray culumadii diinta laga baran jiray iyo iyo maamuladii masaajida oo idil.
Taliska TPLF waxuu qasab ugu wareejiyay masaajida Ethiopia oo dhan dad heysta madhab cusub oo ay ku sheegeen Al-xabash. Waxaana dhamaan masaajida Imaamada iyo maamulada masaajida la baray nidaam cusub. Shacabka muslimiinta ah arrintaas waa u dul qaadan waayeen waxayna bilaabeen gadood iyo banaanbaxyo. Ninkasta oo ka horyimadana si hoose ayay TPLF xabsiga ugu taxaabaysay ama kuwo badan oo kamid ah way dileen.
Taliska Ethiopia oo marar badan isku dayay in Dagaal Diimeed uu ka dhaco Ethiopia, ayaa waxay ku guul dareysteen in kacdoonka Muslimiinta ay ka dhigaan mid u dhaxeeya Muslimiinta xag-jirka ah iyo Diimaha kale ee Ethiopia. Waxay marar badan Ciidamada Woyaanahu gubeen Kinasado ku yaala dhulka Oromada iyaga oo ku sheegaya in mintidiin islaam ah gubeen. http://www.ogadennet.com/onawebsite/?p=13
Hasa ahaatee Dadka Masixiyiinta Ethiopia oo arkay dagaalka gacan ku abuurka ah ee Woyanahu rabaan in Diimaha la isaga hor keenayo ayaa garab istaagay Muslimiinta oo si cad u sheegay in taliska Ethiopia ka daayo faragalinta diimaha.
Marki la oggaaday Xaalada Caafimaad ee Zenawi TPLF waxay goosteen inay muslimiinta Ethiopia u oggoladaan inay mudaharaadyo sameysan karaan. Iyaga oo raba in shacabka Ethiopia lagu jeediyo kacdoonka muslimiinta lagana jeedsado dhimashada Zenawi iyo xaaladisa Caafimaad. Mediaha Ethiopia ayaa waxa aad loo galiyay Muslimiinta mudahaaraadkooda iyo dowlada Ethiopia sida ay ula dhaqmeyso umadaas islaamka ah.
Ciidanka Woyanuhu awood way u lahaayen ay ku hor istaagaana mudaharaadyada Muslimiinta ah. Waxayna awoododi muujiyeen markii Zenawi ay xaqijiyen inuu dhintay. Muslimiinta Ethiopia waxaa loo diiday inay isu soo baxaan maalinki aaska Zenawi. Ciidamada Woyanaha oo aad looga cabsaday awgeed wax soo banaabaxay majirin.
Hada Taliska Ethiopia ayaa waxa uu qorsheeyay In la qabto Doorasho Majlis Aclaha loogu tartamayo oo ka dhici doona guud ahaanba Ethiopia. Siyaasiyiin Ethiopian ah ayaa sheegay in kacdoonka Diimeed ee bilihi ugu danbeeyay ka socday Addis Ababa uu ahaa mid ay TPLF soo qorsheysay u jeedoyinka ugu waaweyna ay aheyd
Muslimka Ethiopia waa shacabka ugu tiro badan Ethiopia waxuuna ku socdaa innu noqdo tirada guud ee Ethiopia saddex jibbaaranto tobanka sanno ee soo socda. Sidaas awgeed In Caalamka la tuso in Ethiopia halis u tahay mintidiin islaam ah oo qabsada talada wadankaas. Taliska Ethiopia waxuu iskudayay innuu cabsi galiyo ree galbeedka oo cadaadis badan taliska Ethiopia kuhaya.
Talisyada Itoobiya ayaa wadamada ree galbeedka kaga dawarsada inay yihiin Dowlad masiixi ah oo shacab muslimiin ah maamusha. hadii taagerada ree galbeedka aysan helina in wadankaas masixiga ah lawaayi doono.
qorshayaashi TPLF oo dhan ayaa iska horyimid illaa hadana wax u hirgalay malaha. Waxayna kiciyeen dad hurday oo siyaasada Ethiopia dhan maamul iyo dhan bulsho intaba ka maqnaa. Eegana kacdoonki muslimiinta ay iyagu bilaabena waxay u la’yihiin maareen waxayna ku qasabanaadeen in dib doorasho maamul oo larabo in muslimiinta lagu jeediyo looqabto bishan October ee fooda inagu soo heysa.